Abaphambukeli bathinjwe ngoonogada kwihotele yaseMexico bahlangulwa ngamapolisa
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » ulwaphulo-mthetho » Abaphambukeli bathinjwe ngoonogada kwihotele yaseMexico bahlangulwa ngamapolisa
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • Cuba Iindaba Eziphambili • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseHaiti • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseMexico zokuPhula • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ngokwamagosa aseMexico, iqela labathimba laquka abantu baseMexico abali-16 kunye nabemi bamanye amazwe abangama-22, phakathi kwabo kukho abantwana abathathu nowasetyhini okhulelweyo.
Iqela labaphambukeli elixhwilwe kwihotele emantla eMexico.
Amapolisa aseMexico kamva afumana amaxhoba ephila kwaye eshiywe ngabathimbi.
Abantu baseHaiti nabaseCuba banokuba ngabantu abafuna indawo yokhuseleko okanye abafuduki.
Iqela labantu baseMexico abali-16 nabangama-22 baseHaiti nabaseCuba baye bahlangulwa emva kokuba bexhwiliwe kwiHotele iSol y Luna kwisixeko saseMatehuala, kwiphondo elikumantla eMexico iSan Luis Potosi.
Umtshutshisi oyintloko wombuso ubhengeze ukuba amaxhoba afunyenwe ephila ngamapolisa aseburhulumenteni ecaleni kwendlela, ekubonakala ukuba alahliwe ngabaxhwili babo.
Ngokomtshutshisi uFederico Garza Herrera, eli qela lalibandakanya abantu baseMexico abali-16 kunye nabemi bamanye amazwe abangama-22, phakathi kwabo kukho abantwana abathathu nowasetyhini okhulelweyo.
Akukacaci kwangoko nokuba abaphambukeli bafuna ukhuseleko okanye abafuduki.
Iingxelo zokuqala zacebisa ukuba abanye abathinjiweyo yayingabantu baseVenezuela.
Abaphathi baseMexico abafudukayo babejonga imeko yabo Mekhsikho njengoko amagosa asebupoliseni esebenzela ukufumana inkuthazo yokuxhwila.
Ukuxhwilwa kwenzeka e Matehuala ihotele ekuqaleni kwangoLwesibini.
Abatshutshisi bathi ii-SUV ezintathu ezazithwele amadoda axhobileyo zafika kwangethuba ehotele i-Sol y Luna zaza zathimba iindwendwe.
Amanye amaxwebhu okuchonga amaxhoba afunyenwe ngaphakathi kumagumbi. Abaqweqwedisi kubonakala ukuba bathabathe nelog yeendwendwe zehotele.
Aba bathinjiweyo kamva bafunyanwa nguGada weSizwe kunye namapolisa kwindlela engaphandle kwaseMatehuala emva kokuba umntu ofowunayo esithi iqela labantu licela uncedo endleleni.